Mikiry izy… mikrizy… | NewsMada
Mikiry izy… mikrizy…
Inona ny marina? Ny amin’ny fifandraisan’ny filohan’ny Repoblika sy ny praiminisitra io. Mandeha ny fombafomba sy ny resaka politika… Na ahoana na ahoana, mila jerena sy omen-danja ny tombontsoa ambonin’ny firenena.
Misy farany ny zava-drehetra, na iza mikiry… Hanao ahoana? Raha mikiry izy, na iza na iza mikiry amin’ny tsy antony: mikrizy ny andrimpanjakana raha tsy voalamina. Mila fifanatonana, fifampidinihana, fifanarahana?
Tsy misy zavatra iombonana sy mampiombona intsony eo amin’ny raharaham-pirenena? Ny tanindrazana iraisana, ny vahoaka nanaovana fanamby nampanantenaina fampandrosoana sy fanatsaram-piainana, ny ho avy hoe hamirapiratra…
Mby aiza izany amin’izao? Misy fomba fiteny malaza izay hoe: “Sazy ho an’ny mpandainga ny tsy fahafahana matoky ny hafa intsony“. Hanao ahoana ny raharaha amin’ny kilaingalainga sy kifitapitaka? Tsy fantatra intsony izay marina.
Tsy fantatra intsony ny “marina“, na ny zava-mitranga na ny olona. Hatreto aloha, mbola sarotra sy ela ny hoe fahamarinan-toerana sy fitoniana politika. Iza na inona no tena fositra? Tafavoaka ety ivelany ny fanasana lamba maloto.
Valalanina sy fanina ny vahoaka: tsy misy fangaraharana, na eo amin’ny samy mpitondra aza? Mazava aloha ny fanoloran’ny Antenimierampirenena anaran’izay ho praiminisitra. Mba tsy ho adihevitra be ny And. 54 amin’ny lalàmpanorenana.
Na mby amin’ny tenin’ny filoha frantsay iray izay, François Mitterrand: “Mba hahazoana miteny “Eny“, mila afa-manao “Tsia“. Arakaraka ny fivoaran-javatra ny hanaovana “Eny” na “Tsia” amin’izay miseho? Na hikiry izy ireo, ka hikrizy eo…
Tsy fantatra intsony izay marina, na inoan-teny, na mendrika alain-tahaka, na azo antoka fa mety sy hahombiazana izay lazainy sy ataony. Ny ambony aza, saro-toerana; ny lehibe aza, miady… Tena ho foana tanteraka amin’izay ny krizy?
Ny hazo no tapaka, miandany amin’ny vy ny sampany. Matoa mitranga izao, efa nisy fotony teo aloha: tsy voatsinjo mialoha, na lesoka tsy nakana lesona. Inona koa ny manaraka? Mba tsy hiverenan’ny krizy ny fanendrena praiminisitra vaovao…